पाथिभरा माताले सबैको मनोकांक्षा पुरा गरुन, असार ७ गते सोमबार, आज तपाईको भाग्य कस्तो छ हेर्नुहोस राशिफल - Mitho Khabar
पाथिभरा माताले सबैको मनोकांक्षा पुरा गरुन, असार ७ गते सोमबार, आज तपाईको भाग्य कस्तो छ हेर्नुहोस राशिफल
June 21, 2021 Mitho KhabarLeaveaComment on पाथिभरा माताले सबैको मनोकांक्षा पुरा गरुन, असार ७ गते सोमबार, आज तपाईको भाग्य कस्तो छ हेर्नुहोस राशिफल
आज श्री शाके १९४३ बि.स.२०७८ साल असार ७ गते सोमबार इश्वी सन २०२१ जुन २१ तारीख जेठ शुक्लपक्ष एकादशी तिथी स्वाती नक्षत्र शिव योग वणिज करण चन्द्रमां तुला राशिमा आनन्दादि योगमा छत्र योग राक्षसनाम संवत्सर सुर्य उत्तरायणं ग्रीष्म ऋतु निर्जला एकादशीव्रत तुलसीको दल राख्ने (ज्यो.प.सरोज घिमिरे)
मेष राशि (चु, चे, चो, ला, लि, लु, ले, लो, अ) जिवन साथिको साथ सहयोग द्वारा ब्यापार ब्यवसायका क्षेत्रमा मनग्य लाभ प्राप्त रहनेछ । नयाँ कार्य थालनिको सम्भाबना रहेकोछ । सभासम्मेलन जन्य कार्यमा सामान्य मान सम्मान प्राप्तीको सम्भाबना रहेकोछ । निर्णय गर्ने क्षमतामा बृद्धि हुनेछ । मनोरञ्जनका श्रोत्र र साधनका श्रेत्रमा सामान्य खर्च बढ्न सक्नेछ ।
मिन राशि (दि, दु, थ, झ, ञ, दे, दो, च, चि) खानपानका कारण स्वास्थमा सामान्य समस्या उत्पन्न हुन सक्नेछ । बाणीका कारण आफन्त जनहरु सगँको सम्बन्धमा सामान्य तनाव उत्पन्न हुन सक्नेछ । मनमा सामान्य डर पैदा हुने साथै मनमा चन्चलताले बास गर्ने छ । मान्यजनको साथ सहयोले आम्दानिका क्षेत्रमा सहयोग पुग्नेछ
काठमाडौं उपत्यकामा निषेधाज्ञाः सवारी साधनमा जोरबिजोर, कुन बार के पसल खोल्न पाइन्छ ? केके गर्न पाइँदैन ?
जन्मदिन विशेष : निशुल्क केबलकार
January 31, 2020 mithokhabar